Dood: aasaaska maalka reer galbeedka iyo awooda - awooda ku xeeran awooda ayaa ah wali awooda dhabta ah "Reer galbeedka waxaa loogu yeeraa hodan iyo awood maxaa yeeley sumadda dadka madow / afrikaanka" ... Run ama been ? ... (VIDEO)
Posted By: KongoLisolowaa: Oktoobar 13, 2019 00: 20 No Comments
Sababta oo ah Madowga / Afrika ka shaqeeyey iyaga ka soo jeeda asalka rajo la’aanta in kabadan 400 sano; iyo in, mushaar la'aan. Maantana, ka dib markaan garowday oo gartay ciyaarta reer Galbeedka, nasiib darro qaar baa Madowga / Afrika sii wad inaad raacdo oo dhagayso sheekooyinka reer Galbeedka. Qaar badanna, sida walaalaheena Congo Kinshasa, ayaga aya u shaqeeya si ay usii wataan awooda sare ee cadaanka.
Walaalaha qaaliga ah ee reer Kongo, walaalayaal, mararka qaarkood waad na ceebaysaa. Sidee loo sharxaa in dadka oo dhan oo leh waxa loogu yeero hoggaamiyeyaasha caqliga caanka ah, ay ku faraxsan yihiin shaydaanka, sixirka, bilowga diabolical, ee maafiyada mid ka mid ah kaniisadahahooda kuwaas oo gacan ka geystay addoonsiga awoowayaashaa awoowayaasha ah ??
Maxuu magacaabista kalifadhiisu salka ku haysaa abaabulka saraakiisha ee shirweynaha ugu sarreeya ?? Miyaanay dabeecadani qayb ka ahayn sii wadashada addoonsiga?
Dhamaan hogaamiyayaashooda xitaa, waxa loogu yeero madaxweynaha, waxay u tageen inay ka qeybgalaan bilowga mid ka mid ah sayidkooda addoonsiga ee Vatican-ka. Waxay bixiyeen tikidhada diyaaradda, waxay ku seexdeen hoteello raaxo leh. Dhamaan kharashyadaan waalan; maxaa sabab ah ?? Immisa lacag ah ayaa caawin doonta dadka gurigaaga jooga?
Haddii uu Vatican-ka magacaabayso ama bilaabayo shiine, Faransiis, Mareykan, Kuuriyada Koofureed, ma waxaad u maleyneysaa in madaxweynaha iyo xubnaha kale ee dowladda ay sameyn doonaan safarka si ay uga qeybgalaan shirarkaan ?? Gabi ahaanba maya! Kaliya Madowga / Afrika, gaar ahaan kuwa reer Kongo, taas samee maxaa yeelay, waxay weli waa addoomo oo la adeegsan karo.
Sep29 04: 53